Ihe ndekọ Redmi 7 na-enweta mmelite ọhụrụ site na MIUI | Gam akporosis
Redmi Rịba ama 7 na-eweta ihe nchebe na August na mmelite MIUI ọhụrụ
Anyị na-adịbeghị anya na-ekwu banyere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke Redmi Rịba ama 7. Na Jenụwarị nke afọ a, e mere ngwaọrụ a dị ka akụkụ nke mmalite nke akara ngosi Redmi ugbu a, nke malitere afọ ole na ole gara aga dịka usoro Xiaomi na katalọgụ ngwaahịa ya. O jisiri ike izipu ihe karịrị nde 20 nke ọnụ ọgụgụ a kemgbe mmalite ya na ahịa, nke bụ ihe ijuanya, na karịa karịa ma ọ bụrụ na anyị echebara nke ahụ echiche O were ihe dị ka afọ 5 karịa ihe karịrị 100 nde Xiaomi smartphones na India, nke bụ ihe anyị mere n'oge na-adịbeghị anya.
Mmelite ọhụrụ na-abịa na Ihe ngosi RedN 7 ruo ụbọchị ole na oles Nke a na-abịa na ihe nchekwa nchekwa ọhụụ maka afọ a ma gbakwunye atụmatụ ọhụrụ, yana dozie esemokwu metụtara ụfọdụ ndị ọrụ.
Ọhụrụ MIUI nke ekwentị na-anata bụ v10.3.10.0PFGMIXM. Nke a, dịka a pụrụ ịhụ na mgbanwe mgbanwe nke anyị jidere, optimizes igbachi ọrụ na n'akpa uwe mode.
Redmi Rịba ama 2019 August 7 Mmelite
Ọ na-agbakwunye ihe nchebe gam akporo gam akporo site na August nke afọ a nke na-enye ya ihe nchebe kachasị ọhụrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, na-edozi ihuenyo ihuenyo nke mere ka ihuenyo ghara ịgbanye mgbe ọ bụla ọkwa ọhụụ ruru, nke mere ka ụfọdụ ndị ọrụ ghara ịma ozi ọhụụ ma ọ bụ ọkwa ndị ọzọ nwere mmasị na oge ụfọdụ.
Redmi Rịba ama 8 na Rịba ama 8 Pro: middị ọhụụ ọhụụ ahụ
N'aka nke ọzọ, gbasara igbochi ngwa, ọhụrụ software update agbakwunye ikike igbochi Google kọntaktị, nke ọtụtụ mmadụ ga-erite uru na ya ma ọ bụrụ na ọ chọghị ka ha na onye na-enye iwu na-emekọrịta ihe spam ma ọ bụ maka ebumnuche ọzọ ọ bụla ma ha achọghị ịnata ihe ọ bụla site na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi Rịba ama 7 na-eweta ihe nchebe na August na mmelite MIUI ọhụrụ
Xiaomi kariri onu ogugu nke nde 100 nke ere na India